Karim Benzema Oo Qirtay In Qoyskiisa Iyo Asxaabtiisu Doonayeen Inuu Iskaga Tago Real Madrid & Dhibaatooyinkii Ka Qabsaday Bernabeu - Gool24.Net
Karim Benzema Oo Qirtay In Qoyskiisa Iyo Asxaabtiisu Doonayeen Inuu Iskaga Tago Real Madrid & Dhibaatooyinkii Ka Qabsaday Bernabeu
Weeraryahanka Real Madrid ee Karim Benzema ayaa qirtay in noloshu ku adkaatay markii uu sannadkii 2009kii ku biiray Los Blancos, halkaas oo ay isku mar tageen Cristiano Ronaldo iyo Ricardo Kaka.
Real Madrid ayaa Benzema kala soo saxeexatay kooxda Lyon iyadoo ay markaa da’diisu ahayd 21 jir, waxaana waraysi uu bixiyey uu kaga sheekeeyey caqabadihii adkaa ee uu ugu tegay Santiago Bernabeu oo ay ka mid ahayd in aanu luuqadda Spanish-ka garanayn, in ciyaartooyo waaweyn ay booskiisa sii haysteen iyo duruufo kale oo nololeed.
Benzema oo ka hadlayay sidii ay ku bilaabantay noloshiisa Real Madrid ayaa waxa uu qirtay in qoyskiisa, wakiilkiisa iyo asxaabtiisuba ay u sheegeen inuu kusoo laabto Faransiiska oo uu iskaga yimaaddo Real Madrid oo uu waqti kooban joogay markaas, laakiin uu iska diiday.
Isaga oo ka jawaabayay su’aal laga weydiiyey bilowgii noloshiisa Real Madrid, waxa uu yidhi: “Asxaabtayda, qoyskayga iyo wakiilladaydu, waxay igu yidhaahdeen: ‘kusoo laabo waddankaaga.’ Aniguna waxaan u sheegay in aanan taas karayn”.
Karim Benzema waxa uu ka hadlay sidii uu ahaa kulan uu la yeedhay Florentino Perez, waxaanu yidhi: “Albaabka ayaan furay, waxaanan arkay isaga (Florentino Perez). Waan xasuustaa, wuxuu igu yidhi: ‘ma waxbaad doonaysaa inaad ii sheegto?’ … waxaan ku idhi: ‘Haa, dabcan’.”
Sidaas oo ay tahay, Benzema waxa uu xaqiiqsaday inay ku adag tahay la qabsiga caasimadda Spain. Waxa kale oo u raacday in booska weerarka Real Madrid uu ka haysto Gonzalo Higuain oo uu isagu kursiga kaydka fadhiyayo, iyadoo uu tababarena ahaa Manuel Pellegrini.
Karim oo ka hadlay xaaladdan waxa uu yidhi: “Maskax ahaan umaan diyaarsanayn qiimaha ay Real Madrid leedahay. Kooxda, taageereyaasha, cadaadiska, caasimadda… Kaliday ayaan ahaa, kumaan hadli karayn Spanish-ka, waxay ahayd waqti adag.
“Haddii aanad garoonka gudihiisa si wanaagsan ku dareemin, way kugu adkaanaysaa. Taas ayaa igu dhacday sannadkii iigu horreeyey Los Blancos.”
Waxaas oo dhan waa uu kasoo gudbay Benzema, waxaanu hadda diiwaanka taariikhda Real Madrid ugu jira 250 gool oo uu isagu dhaliyey, waana ciyaartoyga shanaad ee ugu goolasha badan taariikhda kooxda. Laakiin sida uu isagu rumaysan yahay in goolal la dhaliyo macno sidaa usii badan ma laha, waxaanu yidhi; “Weeraryahanku waa inuu yaqaano sida waxyaabo badan loo qabto, kaliya gool dhalinta uun maaha.
“Anigu goolal waan dhalin karaa, laakiin haddii aanan kubadda taabanin 90 daqiiqadood, taas ayaa dhibaato ah.”